FJKM Manazary Maritiora Ilafy - 3DMadagascar
Misaora an’ I Jehovah ry fanahiko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny Anarany Masina. Misaotra an’ Andriamanitra tokoa isika fa noho ny fitahiany dia tratra ny Jobily faha 150 taona (1864 – 2014). Zava-dehibe tokoa izany no zara ho antsika rehetra teraky ny FJKM Manazary Maritiora Ilafy. Hankalaza io vanim-potoana lehibe io isika no hamela Tsangam-bato lehibe dia ny fanitarana ny trano Fiangonana. Ny teti-bidin’ ny io asa io dia 120 tapitrisa Ariary na 600 millions FMG.
Koa fifaliana ho an’ny Komitin’ny faha 150 taona no manaitra antsika Zanaka am-pielezana rehetra na eto an-toerana na any ampitan-dranomasina fa ny tao-trano tsy vitan’ny irery. Mahatoky izahay fa hahatsiaro ny loharano nipoirana ianareo ka handray anjara am-pitiavana sy am-pifaliana.
Jobily faha 150 taona